15 maleeshiyo Al-Shabaab ah oo lagu dilay duqeymo Mareykanku ka fuliyay Soomaaliya asbuucii tagay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomalia15 maleeshiyo Al-Shabaab ah oo lagu dilay duqeymo Mareykanku ka fuliyay Soomaaliya asbuucii tagay
15 maleeshiyo Al-Shabaab ah oo lagu dilay duqeymo Mareykanku ka fuliyay Soomaaliya asbuucii tagay
March 21, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Duqeymo uu Mareykanku ka geystay gudaha Soomaaliya ayaa lagu dilay in ka badan 15 maleeshiyo oo katirsan Al-Shabaab, afhayeenka Taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) oo magaciisa la dhaho Major Karl ayaa idaacada VOA qeybta English-ka u sheegay Jimcadii.
AFRICOM ayaa war-saxaafadeed ku sheegtay in ay qaaday shan duqeymood Isniintii iyo Talaadadii oo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab deegaanka janaale ee Shabeellaha Hoose.
Mareykanka ayaa sanadihii u dambeeyay kordhiyay weerarada ka dhanka ah maleeshiyada Al-Shabaab. Sanadkan 2020 Mareykanka ayaa 32 duqeymood ka fuliyay gudaha Soomaaliya.
January 8, 2020 Ugu yaraan shan qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay Muqdisho
Madaxweynaha Puntland oo safarkiisii ugu horeeyay ku tagi doona Muqdisho
Puntland deputy police officer dies from shooting wound
Bosaso-(Puntland Mirror) Puntland’s deputy police officer Jama Sahardid has died a day after he was shot in the stomach and chest while he was walking in Bosaso port town, medical sources confirmed to Puntland Mirror. [...]
Golaha wasiiradda Puntland oo sheegay in Somaliland aysan sii joogi doonin dhulka Puntland
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa fariin digniin ah u dirtay Somaliland in ay joojiso dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ay ka wado gobolka Sool, sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay shirka asbuuclaha ah ee golaha wasiiradda. Golaha wasiiradda [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Kalafadhigii 37-aad ee golaha wakiilada Puntland ayaa maanta oo Arbaco ah ka furmay caasimada Puntland, Garoowe. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ku-xigeenkiisa Cabdixakiin Cabdulaahi Camay iyo xubno kamid ah golaha wasiirada ayaa ka [...]